त्रुटि 924 प्ले बजार: कारणहरू र उपचार
सफ्टवेयर त्रुटिहरू - कुरा त दुर्लभ छैन। सधैं सम्भव contingencies तिनीहरूलाई कारण छ कि। के एक विशेष आवेदन, त्रुटि कोड को पुस्ता को एक प्रणाली संग मा रहेको छ प्रयोगकर्ता बताउन गर्न। यो बुझेर तपाईं सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। कोड त्रुटि 924 प्ले बजारमा पनि यसको व्याख्या र सम्भव समाधान छ। हामीलाई थप विवरण यस जाँचौं।
कहिले र त्रुटि 924 किन हुन्छ?
धेरै प्रयोगकर्ताहरू त्रुटि उन्नयन को समयमा हुन्छ वा संवाददाता सन्देश के सूचित गुगल प्ले स्टोर देखि आवेदन स्थापना गर्ने उल्लेख छ। विशेषता चुनौतीहरू स्थापना वा कुनै पनि सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ। आधिकारिक गुगल समर्थन र त्रुटि कोड 924 अर्थ कुनै नेटवर्क रिपोर्ट हुनत, यो कहिलेकाहीं पहिलो नजर कारण मा अदृश्य अन्य मा हुन सक्छ।
यस्तो सिस्टम विफलता हटाउन सबै भन्दा ठूलो गर्न सानो देखि जान राम्रो छ। सबैभन्दा जटिल र बहु-चरण - कि, पहिलो एक सरल समाधान विधि, र त्यसपछि प्रयोग गरिएको छ।
त्रुटि कोड 924: पहिलो सहायता
पहिलो कुरा हामी सुरु गर्नुपर्छ आगरणको सिस्टम - विशेषज्ञहरु को सल्लाह पालन, र तपाईं इन्टरनेट जडान निश्चित गर्नुहोस्। यातायात वाइफाइ वा मोबाइल मार्फत जाँच गर्दछ। यदि उपलब्ध छैन, तपाईं यसलाई प्लग र उहाँले प्रकट हुनेछ जब लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि लायक फेरि आवेदन स्थापना गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई मदत छैन भने - उपकरण रिबुट गर्न।
त्रुटि 924 सामना गर्दा पनि निश्चित गर्न आवश्यक छ मिति र आफ्नो फोन वा ट्याब्लेट को समय साचो छ। गुगल प्ले सेवाहरू अक्सर यी मापदण्डहरू बाँधिएको छ।
प्राथमिक जाँच सूचीमा अर्को वस्तु डाउनलोड प्रबन्धक हुन सक्छ। बनाउन यो काम गरिरहेको छ कि निश्चित, यो सेटिङ ट्याब "सबै" मा सम्भव छ। "बन्द" मोडमा सेट गर्नुभयो भने, तपाईं पार्नु पर्छ।
त्रुटि 924 अझै पनि पप छ भने, तपाईंले थप आमूल उपाय गर्ने सार्न छ छौँ। उदाहरणका लागि, यो गुगल प्ले अनुप्रयोग क्यास सफा गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो निम्न कदम मार्फत गएर गर्न सकिन्छ:
तपाईं आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम "एन्ड्रोइड" जान आवश्यक छ।
वस्तु "आवेदन" पाउन वा "आवेदन व्यवस्थापन"।
यो ट्याब "सबै" मा जानुहोस् र Google प्ले वा प्ले बजार पाउन।
वस्तु क्लिक गरेर आवेदन सेटिङहरूमा एउटा संक्रमण हुनेछ।
यसलाई असफल स्मृति र भूमि खाली जो मार्फत एउटा बटन "खाली क्यास", छ।
यो प्रविधी पनि यस्तो असफलता प्रदर्शन गर्न नेतृत्व गुगल सेवाहरू, असफलता को सुइट लागू हुन्छ। यो अझै पनि सुरक्षित छैन, यदि र त्रुटि 924 फेरि स्क्रिनमा देखा, तपाईं अन्य थप गम्भीर उपाय प्रयोग स्विच गर्न आवश्यक छ।
जो समय र ज्ञान को धेरै खर्च गर्दैन कार्यान्वयन लागि उपाय लागू गर्न यो कदम अघि। थप विधिहरू सीधा प्रभावित र एक पुरा, यसको धेरै घटक रूपमा प्रभावित, यदि छैन प्रणाली, प्रयोग गरिनेछ।
स्टार्टर्स लागि, तपाईं Google प्ले अद्यावधिक हटाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, सेटिङमा जानुहोस् र "आवेदन" चयन गर्नुहोस्। तिनीहरूले आवेदन स्टोर फेला पार्न र क्लिक गरेर यसको गुण जान ट्याब "सबै" मा छन्। "अद्यावधिक स्थापना रद्द" देखिन्छ कि विन्डो बटन छ। यसलाई क्लिक गरेर, आवेदन नयाँ फोन वा ट्याब्लेट को राज्य फर्कन हुनेछ। एक समय पछि, त्यो बाहिर गर्नुपर्ने गुगल प्ले अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ कि प्रणाली, मा रिपोर्ट हुनेछ।
सबै manipulations पछि यो यन्त्रलाई रिबुट र इच्छित आवेदन स्थापना गर्न प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रायजसो मा, पर्याप्त समस्या सुलझाने को उपाय कम। तर, यो केही मदत कहिलेकाहीं हुन्छ। तर सधैं किनभने त्यहाँ वैकल्पिक समाधान हो।
गुगल खाता प्रणाली, तथ्याङ्क राख्न प्रयोगकर्ता पहिचान उहाँलाई चासो आवेदन देखाउन अनुमति दिन्छ र यो सम्भव यन्त्रहरू बीच डाटा समक्रमण बनाउँछ। कहिलेकाहीं यो त्रुटिहरू ढोंगी। त्यसैले, तपाईं उपकरणबाट पूर्ण खाता "गुगल" मेटाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो लागि पासवर्ड सम्झना गर्न, किनभने त्यसपछि उहाँले आवश्यक हुनेछ आवश्यक हुनेछ।
यस कार्यका सक्छ जो "लेखा" खण्ड सेटिङ मेनु, मार्फत फेरि प्रदर्शन। यसलाई अन्तर्गत त्यहाँ प्रयोगकर्ता प्रोफाइल सिस्टम उपलब्ध सेवाहरूको सूची हो। Google खाताहरू मा रुचि। नयाँ विन्डो सबै प्रोफाइल को सूची प्रदर्शन गर्नेछ। यो एक हो भने, त्यसपछि तपाईं यसलाई जान आवश्यक छ। तपाईंको खाता भित्र एक पटक, तपाईं सेटिङ मेनुमा आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ। नियम, यो माथिल्लो दायाँ कुनामा छ। यसलाई क्लिक गरेर, सम्भव कार्यहरू, सूची जो बीच "खाता मेटाउने" छन्। सबै खाता मेटाइएको, र अब तपाईं एउटा नयाँ सिर्जना गर्न आवश्यक छ। सेटिङ मेनु नछोडी, तपाईं पहिले नै ज्ञात चयन जान आवश्यक "लेखा।" यसलाई अन्तर्गत त्यहाँ प्रोफाइल विजार्ड क्लिक पछि खुल्छ जो एउटा बटन "खाता थप्नुहोस्" छ। तपाईं नयाँ सिर्जना गर्न वा पुरानो देखि डाटा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईं स्थापित आवेदन र अपरेसन बारेमा सबै जानकारी स्क्राच अर्को खाता सिर्जना भने अघिल्लो वर्ष रहनेछ भन्ने टिप्पण लायक छ।
ठीक छ, सबै भन्दा "हार्ड" त्रुटि 924 को "एन्ड्रोइड" मा समाधान रिसेट कारखाना सेटिङहरूमा यन्त्र गर्न सकिँदैन। यस मामला मा, फोन स्मृति, आवेदन सबै सम्पर्क मेट्न, र सबै कि आन्तरिक भण्डारण भण्डारण गरिएको छ। सञ्चालन सेटिङ मेनु बाट सम्भव छ। यो कि गएर वस्तु "ब्याकअप र रिसेट" समावेश, तपाईँले "रिसेट" चयन गर्न आवश्यक छ। फोन रिबुट हुनेछ र त्यो विधानसभा लाइन तल आए जसमा फारम मा प्रयोगकर्ता प्रदर्शित हुनेछ।
मुद्दा यो त्रुटि 924 के मतलब बारेमा यस लेखमा छलफल गरिएको थियो, र के लड्न तरिकाहरू छन्। सामान्य मामलामा यस्तो समस्या उन्मूलन मौलिक र निर्णायक कदम सुरु हुँदैन। पहिलो तपाईँले फोन आवेदन राज्य उपलब्ध छ भनेर पक्का गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, इन्टरनेट जडान कि छ बनाउन आवश्यक सेवाहरू चलिरहेका छन् भनेर निश्चित। कहिलेकाहीं कारण यस्तो सरल विफलता पूर्णतया सम्पूर्ण खाता पुनर्स्थापना गर्न - यो पनि मिति र समय जाँच लायक छ।
समस्या सरल देखि जटिल कार्यहरू गर्न निर्देशन मा आवश्यक छ समाधान गर्न उत्प्रेरित। यो अर्को सेटिङ एक बिन्दुबाट सार्दा, अनावश्यक हेरफेर वा डेटा आकस्मिक हानि जोगिन हुनेछ।
ठीक छ, सबै भन्दा चरम उपाय को मामला मा, तपाईं फोन नाली अनुकूल फर्मवेयर सधैं छ र एक अधिक उत्पादक, वा घर मा, फ्लैश गर्न सक्नुहुन्छ।
उपयोगिता के छ
स्क्यानिङ लागि विश्वव्यापी कार्यक्रम
गतिवर्धन फायरफक्स: विधि र चाल
स्वतन्त्र सिर्जना multiboot छडी
कसरी ट्याब्लेट "एन्ड्रोइड" reflash गर्न - निर्देशन
आफ्नो हात संग घर मा छत को ध्वनि इन्सुलेशन। ध्वनि इन्सुलेशन संग खण्डका छत। अपार्टमेंट मा छत को ध्वनि इन्सुलेशन - मूल्य
मह, चिनी, दालचिनी को कति ग्राम चमचा मा?
हामी घर मा watercress सलाद बढ्न
वैक्यूम विवरण र विनिर्देशों प्रेस
रेस्टुरेन्ट "Blek Tay": सेतो पत्थर मा विदेशी थाई।
कस्तो तापमानमा बग मर्छ? कसरी बिस्तारै बगैचामा एक अपार्टमेटमा छुट्याउने?
जन Kortajarena। जीवनी र हाइट्स बाटो
फूल ... तिनीहरूले प्रतीक के
"मानविकी र प्राकृतिक विज्ञानको वास्तविक समस्या": पत्रिकाको विशेषताहरू
फो घाउ (प्राथमिक शल्य चिकित्सा उपचार): उपकरण को एक सेट, औषधि